Burma to United Nations Human Rights Envoy Yanghee Lee « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Burma Democratic Concern (BDC) » Burma to United Nations Human Rights Envoy Yanghee Lee
Burma to United Nations Human Rights Envoy Yanghee Lee
ကလေးလို ငိုမနေနဲ့ ရန်ဟီးလီး ဝေဖန်တာ မခံနိုင်ရင် မင်းရာထူးကထွက် ။ ရန်ဟီးလီး မင်းဟာ မြန်မာတွေအတွက်တော့ အစ္စလန်မစ်အကြမ်းဖက်သမားတွေကို ဖင်တုန် အောင်ကြောက်တဲ့ မင်းဆရားကြီးတွေအလိုကျ ကရတဲ့ ရုပ်သေး ရုပ် ကိုးရီးရားမဘဲ။ ‪
#‎Myanmar‬‘s message for Yanghee Lee: Who do you think you are ‪#‎YangheeLee‬.
For Burmese, you are nothing more thanapuppet acting in tandem to appease your bosses who are submissive to extremist Islamist.
Don’t beacrying baby Yanghee Lee and beagrown up person.
If you couldn’t take any criticism then you are not fit for your job.
Tags: Buddhism, Buddhist, Buddhist Monks, Burma, Burma to United Nations Human Rights Envoy Yanghee Lee, burmese, Myanmar, United Nations Human Rights Envoy, United Nations Human Rights Envoy Yanghee Lee, Yanghee Lee
By Burma Democratic Concern (BDC) in Burma Democratic Concern (BDC) on 27/01/2015 .
← Burma to United Nations High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein	အသက် ၁၅ နှစ်သာရှိသေးသောမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးလေးကို အသက်(၂၂)နှစ်အရွယ်မွတ်ကုလား သားမယားရှိသူက ခိုးပြေးကာ ဘာသာလည်းသိမ်းသွင်း၊ အမည်နာမလည်း ပြောင်း စိတ်တိုင်းကျ ပြုကျင့်ပြီးမှ လမ်းဘေးမှာ စွန့်ပစ်ခဲ့သူအား သေဒဏ်ပေးသင့်ပါတယ် →